रुपन्देही हत्याकाण्ड : मानसिक रोगले निम्त्याएको दुखद परिणाम ! – Mission Khabar
रुपन्देही हत्याकाण्ड : मानसिक रोगले निम्त्याएको दुखद परिणाम !
गोपाल ढकाल, मनोविद् २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:५७
गोपाल ढकाल (मनोविद्) । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका मैनाहावा गङ्गादेवी पशु फर्ममा पाँच जनाको सामुहिक हत्या भएको छ । हत्या गर्ने सोही फर्मका कामदार सुर्खेतका झपेन्द्र सिजापती रहेको खुलेको छ । स्थानीयका अनुसार सिञ्जाली मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति हुन ।
हत्या आरोपी सिञ्जालीले राती ९.०० बजे खाना खाएर फर्ममा आउँदा रक्सी बोकेर आएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । आरोपित ब्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा समाजमा कहिलेकाहीँ यस्ता अकल्पनीय र दुखद घटनाहरु दुखद घटना हुन पुग्छन । बेला बेलामा मानसिक रोगका कारण यस्ता दुखद घटना हुँदा “मानसिक रोगीहरु हिंसात्मक र डरलाग्दा हुन्छन् । उनीहरुलाई घर परिवार, समाजबाट ढाटा राख्नु पर्छ वा बाधेर राख्नु पर्छ” भन्ने धारण आम मानिसहरुमा पाईन्छ ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएको ब्यक्तिले कसैको हत्या गर्यो रे भन्ने समाचार सुन्दा वा देख्दा मानसिक रोगी हिंसात्मक नै हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्न पनि सक्छ । तर सबै मानसिक रोगी हिंसात्मक हुदैनन् । नरम खालको मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले हत्या, हिंसा गर्ने सम्भावना हुँदैन् । कडा खालको मानसिक रोग लाग्दा भने शंका, अत्याधिक आवेग, सोचाईमा हुने मतिभ्रम (Delussion), हेराई, सुनाईमा हुने मित्थावास (Hallucination) का कारण अन्जानवस यदा कदा यस्ता घटना घटने पनि गरेका छन् ।
विशेष गरि जाँड रक्सि तथा लागूको दुरब्यसनी , तथा अन्य मानसिक रोगहरु जस्तो सिजोफ्रेनिया, मेनिया, अति रिस उठने रोग, डिलेरियम , डिमेन्सिया जस्ता रोगमा बिरामी कहिले काहीँ आवेगमा आएर हिंसात्मक व्यवहार देखाउन सक्छ। उनीहरुले यस्तो घटना घटाउनुको पछाडि कसैलाई दुख दिन्छु, बदला लिन्छु भनेर जानिबुझि गरेका हुँदैनन् । उनीहरुमा यस्तो सोच्ने क्षमता पनि हुँदैन् ।
यसको अपवाद असामाजिक व्यक्तित्व भएका (Psychopath) हरुमा भने बदलाको भावना हुन्छ उनीहरु सोचविचार गरिकन अपराध गर्ने गर्दछन। अपराध गरेकोमा उनीहरुलाई कुनै पछुतो पनि हुदैन । मानसिक समस्यामा परेको व्यक्तिबाट कुनै किसिमको अप्रिय घटना नहोस् भनेर घर परिवारका सदस्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बिरामीले अरुलाई मात्र होईन आफुलाई पनि खतरामा पर्न सक्छ ।
परिवारले ध्यान दिनुपर्ने कुराः
१) कडा खालको मानसिक रोग लागेको ब्यक्तिलाई म रोगी छु मैले उपचार गर्नु्पर्छ भन्ने ज्ञान हुदैन । यस्तो अबस्थामा घर परिवारका सदस्यले फकाई फुलाई अस्पताल लैजानुपर्छ ।
२) उनीहरुसँग विवाद गर्ने , झर्को फर्को गर्ने गर्नु हुँदैन् । औषधी खान नमान्दा फकाएर खुवाउनुपर्छ ।
३) बिरामी र परिवारलाई असुरक्षाको महसुस भएमा अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
४) उनीहरुसँग ठूलो स्वरले बोल्ने, ईशाराले बोल्ने, आँखामा आँखा जुधाएर बोल्ने गर्नुहुँदैन् ।
५) मानसिक रोगीले भेट्ने गरी हात हतियार, धारिले वस्तु, डोरी लगायतका सामान राख्नु हुँदैन् ।
६) विरामी उत्तेजित भएका बेला रेडियो, टिभि बन्दगर्नु पर्छ ।
७) आफुलाई खतरा महसुस भएमा तुरुन्त रोगीबाट टाढा जानुपर्छ ।
८) मानसिक रोगले जाँड , रक्सी , लागु प्रदार्थको सेबन गरेमा दुर्घटनाको जोखिम अझ बढने हुँदा बिशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ।
(लेखक मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा आबद्ध छन् ।)